Fivarotana ara-barotra - EURUSD, XAUUSD & CADJPY (150 ny Pips rehetra) - Forex Lens
Esory ny maha-mpikambana
Varotra sy fanohanana an-tanana: 1-888-673-9567
TRANO FIVAROTANA TRANO FAMPISEHOANA
FIKAMBANANA PRO TRADER
FIVAROTANA NY PASTANA
ANALYSIS TEKNIKA ARONDRAY
Fanapahana varotra - EURUSD, XAUUSD & CADJPY (150 Total Pips)
Fanakalozam-barotra momba ny varotra Forex
Tongasoa eto amin'ny fivarotana varotra Forex mivantana nataon'ny RP Forex. Nandritra ny seho mivantana androany dia nandinika ny satan'ireo varotra telo izay efa nohadihadiana omaly sy ireo varotra niditra mivantana izahay tamin'ny fotoam-pivoriana androany. Mbola tsy manana fatiantoka isika amin'ity herinandro ity (ary ny herinandro lasa teo) ary izany dia zavatra izay reharehan'ny mpikambana rehetra ao amin'ny efitrano fivarotana forex.
Nandritra ny fotoam-pivarotana mivantana omaly dia nahita famantarana varotra ho an'ny AUDJPY, AUDUSD & CADJPY izahay. Ny roa amin'ireo varotra telo dia niditra satria ny fepetra fidirana manokana ho azy ireo dia nihaona. Nanao fanadihadiana mivantana sy fidirana ho an'ny fohy CADJPY izahay ary ny mpivady dia nitondra mihoatra ny +60 pips nanomboka teo. Ny AUDJPY hatrizay dia navotsotra taorian'ny nahazoanay fanilihana famerenana amin'ny laoniny ny haavonay. Ireo varotra roa ireo dia samy nahazo tombony + 100 pips sy fanisana.
Androany, nanao fanadihadiana ara-teknika mivantana izahay ary niantso antso ho an'ny XAUUSD Gold sy EURUSD. Nandritra ny fotoam-pivoriana maharitra 30 minitra dia afaka namantatra mora foana ny fametrahana varotra roa avy hatrany izahay tamin'ny alàlan'ny paikadim-bola. Raha ny tokony ho izy dia te-hiala amin'ireo varotra ireo isika alohan'ny famoahana vaovao tsy miankina amin'ny karama (NFP) rahampitso.
Rahampitso, ny famoahana ny karama tsy mamboly (NFP) amin'ny 8:30 maraina EST, 2 ora alohan'ny fotoam-pivoriana mivantana. Ho tsinontsinona tokoa ireo tsena taloha sy aorian'ny famoahana, koa samia mitandrema. Hodinihintsika ny famoahana ny NFP, ny fomba niandohan'ity herinandro ara-barotra ity ary ny famantarana ara-barotra mandritra ny herinandro ho avy. Jereo rahampitso ho an'ny fotoam-pivarotana mivantana ataontsika mivantana manomboka amin'ny 11:00 maraina EST ao amin'ny sehatry ny Varotra misy anay. Tandremo sy manao varotra sambatra. Raha mbola tsy niara-niditra taminay ianao, dia tadidio fa manolotra 2 volana ho an'ny vidin'ny 1 ka anio alina izahay amin'ny misasak'alina (12:00 AM EST).
Midira ao amin'ny vavahadin'ny varotra mba hijery ny Fivoriana feno
Hamarino ny fiverenan'ny fivoriana mivantana omaly: Oktobra 30th, 2019
Raha mbola tsy nanao sonia ianao Fandraisana anjara amin'ny fivarotana Forex, afaka manao izany ianao manindry eto.
Oktobra 31, 2019 /by Forex Lens Vaovao
Tags: cadjpy, vola varotra, eurusd, forex Price hetsika, forex famantarana, efitrano fivarotana forex, volamena, volamena varotra, fifanakalozana varotra forex, varotra mivantana, varotra nfp, pips, tombony, varotra fananganana, xauusd
Zarao ity teny
Share amin'ny Mail
https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2019/11/FXL-Youtube-October-31-20191.jpg 720 1280 Forex Lens Vaovao https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2018/01/forex-lens-logo-expert-forex-signals.png Forex Lens Vaovao2019-10-31 12:04:152019-11-20 15:29:48Fitaovana ara-barotra - EURUSD, XAUUSD & CADJPY (150 Total Pips)
Miditra ny varotra EURNZD + NZDCAD efa ho vonona
Famerenan'ny dolara amerikana, miverina ny fotoana, hiroborobo ny fotoana handraisan'ny lehibe?
Tonga amin'ny volamena 1675 Level Level + ny volamena
Famakafaka ny + amerikana any anaty rano lalina?
Mitohy + ny loza mampanan-kery amin'ny Coronavirus + ny fomba hamarotana ity hetsika ity?
DXY Bulls Averina Amin'ny latabatra + Manina BTC!
Bebe kokoa momba ny Forex
Bitcoin dia mahatratra 4,400 ny haavon'ny May + EthereumOktobra 14, 2021 - 4: 07 pm
CADCHF Swing Trade amin'ny tombom-barotra + Bitcoin ka hatramin'ny $ 70,000?Oktobra 13, 2021 - 3: 24 pm
Dolara manadio isan-taona avo + CADCHF Swing Trade niditraOktobra 12, 2021 - 4: 20 pm
Vokatry ny karama tsy an-tsaha mifangaro + Crypto Markets Pullback alohan'ny manarakaOktobra 8, 2021 - 4: 54 pm
Dolara napetraka handà ny 94.125 + Maniry hatramin'ny 4,000 $ i EthereumOktobra 7, 2021 - 4: 04 pm
Henoy i Jon Morgan ao amin'ny SiriusXM miaraka amin'i Andrew Krystal ao Canada Talks 167
Blog Forex Forex
Fanabeazana amin'ny tsena
Misongadina amin'ny SiriusXM
Midira hiaraka amin'ny vondron'olona eto amintsika amin'izao Discord ary hiresaka amin'ny mpivarotra sy mpikambana hafa! #ForexLens https://t.co/2RRYlrnJYH
- Forex Lens (@ForexLens) Aprily 9, 2020
Mianara, Varotra, Tombontsoa
Forex Lens dia manome vahaolana momba ny fifanakalozana ara-barotra Forex ho an'ireo vao manomboka sy mpivarotra manam-pahaizana manokana. Aza misalasala mandefa mailaka na miantso anay raha misy fanontaniana, fanehoan-kevitra na olana.
Ivotoerana CF Eaton Center,
© Copyright - Forex Lens - Ny masonao mankamin'ny tsenan-tsena
Ny matihanina sy ny marketing dia hain'ny mpiara-miombon'antoka eto aminay Ny Fuse Inc
Aoka ho fantatrao fa ny varotra forex sy ny varotra amin'ny tsena rehetra anisan'izany ny crypto dia mety manana fatiantoka ara-bola ary koa ny fatiantoka. Aza varotra vola amina vola tsy zakan'ny volanao. Azo atao ny mamoy ny volanao rehetra rehefa mivarotra satria maro ny anton-javatra izay tsy eo amin'ny fifehezanao na ny anay. Ny brokers forex sasany dia mety mitazona anao tompon'andraikitra amin'ny fifanakalozana ara-barotra izay mihoatra ny fifandanjanao ary mandeha amin'ny sisiny. Fantaro fa anao ity andraikitra ity. Forex Lens tsy mandray andraikitra amin'izay mety ho fatiantoka vokatry ny serivisy ataonay, famantarana forex, marika crypto, kaonty fitantanana na marika hafa izay mety omentsika tsindraindray. Forex Lens dia ampiasaina ho fitaovana fanabeazana hanampiana anao hahita ny fomba fiasan'ny mpivarotra sy ny mpivarotra fihodinam-bola isan'andro isan'andro sy isan-kerinandro. Amin'ny alàlan'ny sonia ho mpanjifa no ekenanao izany Forex Lens tsy manome toro-hevitra ara-bola fa manome foto-pianarana eo amin'ny tsena. Tsy mandray andraikitra amin'ny fatiantoka na fatiantoka amin'ny kaontinao izahay noho ny marika sy / na serivisma na vokatra forex mifandraika amin'ny tranokalanay rehetra misy an'io.
Fanadihadiana momba ny hetsika - AUDUSD, AUDJPY & CADJPY Famerenana tombony isan-kerinandro + Fijerena ny tsena amin'ny herinandro ho avy
Ity tranonkala ity dia mampiasa cookies. Amin'ny fanohizanao ny fijerena ilay tranonkala, manaiky ny fampiasana ny cookies izahay.
OKHamantatra bebe kokoa
Cookie sy fanalahidy manokana
Ahoana no mampiasa mofomamy
Azontsika atao ny mangataka mofomamy apetraka amin'ny fitaovanao. Mampiasa mofomamy izahay mba hampahafantarana anay rehefa mitsidika ny tranokalanay izahay, ny fomba ifandraisanao aminay, hampanan-karena ny traikefan'ny mpampiasa anao ary ny hampifanaraka ny fifandraisanao amin'ny tranokalanay.
Kitiho ny lohatenin'ny sokajy samihafa hahitana bebe kokoa. Azonao atao koa ny manova ny tianao amin'ny sasany. Mariho fa ny fanakanana karazana cookies iray dia mety hisy fiantraikany amin'ny traikefanao ao amin'ny tranokalanay sy ny serivisy azontsika atolotra.
Cookies tranokala tena ilaina
Ireo cookies dia ilaina tokoa raha manome anao tolotra omena amin'ny alàlan'ny tranokalanay ary hampiasa ny endri-javatra sasany.
Satria ilaina tokoa ireo cookies ireo mba hanaterana ilay tranokala, tsy afaka mandà azy ianao raha tsy misy fiantraikany amin'ny fomba fiasan'ny tranonkalantsika. Azonao atao ny manakana na mamafa ny fanao amin'ny alàlan'ny fanovana ny filanjana lozisialy ary manery ny sakana rehetra ao amin'ity tranokala ity.
Ireo cookies ireo dia manangona fampahalalana izay ampiasaina na endrika agregatasy mba hanampiana anay hahatakatra ny fomba ampiasain'ny tranokalanay na ny fahombiazan'ny fanentanana ara-barotra, na mba hanampiana anay hampiasa ny tranokalanay sy ny fangatahanay ho anao mba hampivoarana ny fanandramana.
Raha tsy tianao ny hanarahanay ny mpizahanao amin'ny tranokalanay dia azonao atao ny manalavitra ny fanandramana ao amin'ny navigateur eto:
Tsindrio raha azo atao / ampiasao ny fanaraha-maso google analytics.
Serivisy hafa any ivelany
Mampiasa serivisy ivelany ihany koa izahay toa ny Google Webfonts, Google Maps ary mpamatsy horonantsary ivelany. Satria mety manangona angon-drakitra manokana toa ny adiresy IP-nao ireo mpamatsy tolotra ireo ka avelanay ianao hanakana azy ireo eto. Mba tsarovy fa mety hampihena ny fiasa sy ny fisehon'ny tranokalanay izany. Hanomboka ny fanovana raha vao mamerina ny pejy ianao.
Fitaovana Google Webfont:
Tsindrio raha hanamboatra / hanafoana ny vohikala google.
Fikarohana momba ny sarintany Google:
Kitiho raha azo atao / hanafoana ny sarintany google.
Nanomboka ny horonantsary Vimeo sy Youtube:
Tsindrio raha hanova / hampihena ny tsenan'ny horonantsary.
Azonao atao ny mamaky antsipirihany momba ny kitapom-batana sy ny tsiambaratelo amin'ny antsipirian'ny pejy momba ny fiainana manokana.